Pyae Heinn Kyaw's Blog | Sharing Ethical Hacking, Cyber Security related knowledge. You can also find out contents about iOS and macOS.
Facebook နဲ့ Apple တို့ရဲ့တိုက်ပွဲက iOS user တွေကို ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်လား?
Apple, News / By Pyae Heinn Kyaw
UNICODE ဒီပြဿနာတွေရဲ့အစက iOS 14 ပဲဖြစ်ပါတယ် .. ပြဿနာအစအဆုံးနားလည်သွားအောင် အရင်ဆုံး Facebook ရဲ့လည်ပတ်ပုံကိုရှင်းပြမှဖြစ်ပါမယ် Facebook ကိုကျွန်တော်တို့က အလကားသုံးလို့ရနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ (user) တွေဟာ Facebook ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖြစ်နေလို့ပါ .. Facebook ဟာ အသုံးပြုသူများတဲ့အတွက်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ Facebook ကိုပိုက်ဆံပေးပြီး သူတို့ရဲ့ Product တွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီရောက်အောင်ပြခိုင်းပါတယ် ဒီတော့ ဘယ် user တွေက ဘယ်ထုတ်ကုန်တွေကိုကြိုက်တတ်လဲဆိုတာ Facebook ကလေ့လာပြီး အဆိုပါ user နဲ့သင့်တော်မယ့် product မျိုးကို သူ့ရဲ့ newsfeed မှာပြပေးပါတော့တယ် ဒါပေမယ့် Facebook က user တယောက်ချင်းစီရဲ့အကြိုက်ကို ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်သလဲ? ပထမတချက်အနေနဲ့ Facebook ကတီထွင်ထားတဲ့ Machine Learning …
Facebook နဲ့ Apple တို့ရဲ့တိုက်ပွဲက iOS user တွေကို ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်လား? Read More »